Sidee loo Diiwaan Online Music iyo Bedelka in Lugood?
> Resource > Lugood > Sidee loo Diiwaan Online Music iyo Bedelka in Lugood
"Waxaan helay song fantastik ah ee MySpace oo aad rabto in la ciyaaray on my iPod Laakiin maaddaama ay haatan ma aha in suuqa, Anigu taas ma iibsan kartaa ma suroobi karaa waddo waa in hadda u hesho..?" - Peter
"Tan iyo markii grooveshark.com iyo Pandora.com yihiin uqaabaynta, anigu ma aan ka laba goobood oo kala soo bixi kartaa music mar dambe sababtoo ah downloader aan isticmaalo mar dambe u shaqeeyo" -Emily
Waa sahlan tahay in la helo iyo muusiko dhegayso oo ku saabsan internetka. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado offline Raaxo, way adag tahay. Si aad u bedesho xaaladda, sida ugu fudud ayaa laga yaabaa inuu badbaadiyo music internetka. In qayb ka dib, waxaan doonayaa in aan ka hadlo sida ay u qoraan music online.
In la diiwaan geliyo online video iyo wareejiyo music lagu duubay si Lugood, ayaa loo baahan yahay qalab. Si loo badbaadiyo waqtiga iyo tamarta, halkan waxaan dooneynaa in ay isticmaalaan qalab hal-stop, Streaming Audio Recorder . Waxaa duubi kartaa music online ee 1: 1 oo tayo leh, oo la artist, magaca album iyo cover tagged. Waxa kaliya oo hal music click ah lagu wareejiyo si toos ah ayaa laga yaabaa in ay Lugood. Download, rakibi iyo maamusho Streaming taariikhqorihii Audio.
1 Record music online
Guji ee "Diiwaanka" button on interface ugu weyn ee Streaming Audio Recorder. Markaasuu ku xidhmaan internetka. Tag internetka, ka heli song aad u baahan tahay si ay u qoraan oo matala. Taasi waa! Geeyo The Audio taariikhqorihii ku dhameysan yaabaa duubo si toos ah aad u. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka lagu qoro, waa in aad ka heli qalabka Tags heesta si fiican u la artist, macluumaad album. Taasi waa mid ka mid ah qaababka ay sixir.
Ka dib marka aad si guul leh u qoraan music ah, waxaad samayn kartaa inta badan music by taas oo ka dhigaysa galay ringtone aad telefoonka, iPhone ka mid ahaa. Riix in ay doortaan song oo guji icon qaadashada ringtone ah, ka dibna go'aan muddada ringtone ah.
2 Bedelka music lagu duubay si Lugood
Streaming Audio Recorder Gelineya inaad si toos ah u gudbiyaan music lagu duubay si Lugood. Dooro heeso ka dibna riix "Add to Lugood" button in ay iyaga ku daray in ay Lugood aad.
Qalab Nice iyo hab fudud, sax? Rajaynaynaa in aad u xiise badan oo ku riyaaqayaa music la Streaming Audio Recorder .
Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Data aan kaabta Lugood